Inguva yekuchinja Email Kushambadzira Maitiro kana ... Martech Zone
Inguva yekuchinja Email Kushambadzira Maitiro apo…
China, May 8, 2008 NeChishanu, Gumiguru 6, 2017 Douglas Karr
Maemail ako anotaridzika seizvi:
Zvichida mutsara wenyaya unogombedzera uye wakasarudzika panzvimbo ye "Shanduko Iyi: Nyaya 46"
Zvichida imwe mitsetse inotsemuka kuitira kuti ndirege kuputira sezvandaiverenga (ini handina kuiverenga, zvaive zvisingaite).
Zvichida Multi-chikamu MIME maemail ekutumira mameseji kune avo vanoda kutaridzika kutaridzika, asi HTML kune avo vedu vanofarira email yakanyatsogadzirwa.
Zvichida sumo inomanikidza?
Zvichida imwe chena nzvimbo pakati pemisoro kuti zvive nyore kuverenga?
Zvichida misoro yekusimbisa misoro dzakasiyana uye nekusiyanisa ivo kubva kutsananguro?
Zvichida runyorwa rwakabatanidzwa nehukama neruzivo zvine chekuita neese?
Zvichida runyorwa rwezvakajairika zvinongedzo kudzokera kuwebhu saiti?
Zvichida zvakasiyana Email Service Provider kana yako yakaoma kushandisa?
Chikamu chinotyisa apa ndechekuti ChinjaThis'mutsara ndewe:
ShandukoThis irikugadzira mhando nyowani yemidhiya. Chimiro chezvenhau chinoshandisa maturusi aripo (senge maPDF, mablog uye webhu) kupokana nenzira inogadzirwa uye nekuparadzirwa pfungwa.
Isangano rakakura rine huwandu hwakawanda hwezvinhu kukurudzira shanduko muvatungamiriri uye vezvemabhizinesi. Zvakangoipa zvakanyanya kuti ivo vanosarudza kufuratira nzira imwechete yekutaurirana iyo inondichengeta ndichidzoka kune yavo webhusaiti.
5 / 8 / 2008: Kunyangwe ini ndanyoresa, ini ndagamuchira iyi email nhasi. Asina chokwadi nezvingave zvakaitika asi kwaive kuvandudzika kukuru.
Tags: bulleted listkuchinja izvizvakajairika zvinongedzoeemail kuumbwamusorozivisomutsara unotyokaLinksmimeyakawanda-chikamu mimeNewslettermutsara wenyayachena nzvimbo
Iwo maCisco I-Mubayiro Mafainari!
Dhawunirodha Chirongwa Ichi Chatakavaka Kugadzirisa Chirongwa Chedu?
Pamwe wakairova mumusoro chaimo. Positi yakanaka uye zano rakakura.
Chandinofarira ndechekuti mutengi anodzivirira "Issue46" yavo mumutsara wenyaya uye vane nhamba yega yega mumutsara wenyaya. Ndakanyatsonzwa mumwe achiti, "Nekuda kwekuti vanyoreri vedu varonge maemail akachengetwa mune yavo email mutengi."
Uri kutamba neni here? Unondibhadharira mari hombe kuti ndikuudze maitiro ekuita zvirinani kuvhurika uye kudzvanya-thru mareti asi iwe hausi kuda kusimuka pamutsara wenyaya? Rombo rakanaka pamametric iwayo… ..